नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : सधैं जित्नेले पनि यती बिघ्न लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्ने रहेछ एक दिन !!!!!
सधैं जित्नेले पनि यती बिघ्न लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्ने रहेछ एक दिन !!!!!
सधैं जित्नेले पनि यती बिघ्न लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्ने रहेछ एक दिन !!!!! भन्ने कुरा भर्खर सम्पन्न ब्राजिलको फुटवल हेरेर सिक्ने होकी हामीले पनि । यो कुरा फुटवलमा मात्र होइन हरेक कुरामा लागु हुन्छ त्यसैले हामी कसैले पनि घमण्ड गर्नु बेकार छ । समय यती बलवान हुन्छ कि यसले कसैलाई पनि सधैं साथ दिँदैन । १२ बर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ ! अझै थप्न मन लाग्यो : एक दुई गोल मात्र होर भन्या ! सात गोल खाए मोराहरुले !!! म पनि सात गोल खाने खेलमा खेल्न त सक्छु गाँठे, आखिर गोर्खाली न परें । यसो भने कसो होला ??